Posted By: mygate wayon: November 08, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Robert Chua အား (၆.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့ (၁၆၀၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်...	Read more
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(ပင်မ) အဆောက်အအုံ ပန္နက်တိုင်စိုက်ထူ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် (၂၉.၁၀.၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(ပင်မ) အဆောက်အအုံ ဆောက်လု...	Read more
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Robert Chua အား ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင်ေ...	Read more
Posted By: mygate wayon: October 27, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရန် အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို...	Read more
Posted By: mygate wayon: October 23, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
(၂၀.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံခြင်းကို သဘောတူလျာထားနိုင်ရန် ပဲခူးတို...	Read more
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များအား Asian Development Bank (ADB) မှ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်တွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: October 20, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအား Asian Development Bank (ADB) မှ တာဝန်ရှိသူများက...	Read more
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊...	Read more
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ၊ ၂၀၁၇ ၂၈.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉:ဝဝ နာရီအချိန်တွင် လှည်းကူးမြို့နယ် ၊ မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်း၌ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်းဦးဆောင်သေ...	Read more